Bazoqondiswa abalwela izikhundla kwi-EFF: Malema – LIVE Express
Staff Reporter | 18 August 2016 | News, Politics |
U-Commander In Chief (CIC) we-Economic Freedom Fighters ( EFF), u-Julius Malema, usethumele isexwayiso esiqinile kumalunga aleli qembu awasole ngokulwela izikhundla nokuba osomathuba.
Lokhu kuvele ngenkathi i-EFF ibinesithangami nabezindaba e-Alexandra, e-Johannesburg, ngoLwesithathu.
I-EFF bekulindeleke ukuba isebenzisane ne-DA komasipala lapho lingekho iqembu elinqobe ngamalengiso, nokwiyinto ebizovula amathuba okuqhoqhobala izikhundla kumalunga aleli qembu.
Kodwa-ke lokho akuzange kwenzeke njengoba i-EFF imemezele ngoLwesithathu ukuthi angeke ize isebenzisane naqembu, yathi izimisele ngokuba yiqembu eliphikisayo kodwa yathembisa ngokuthi uma kuthathwa izinqumo izokweseka amaqembu aphikisayo athile ngamavoti ngaphandle kweqembu elibusayo, i-African National Congress (ANC).
“Sibonile esikhathini esedlule, emva kokhetho, izincwadi eziningi ezivela kwamanye amalunga e-EFF alwela ukuba sohlwini lwabazomela iqembu yize noma bengaphumelelanga. Baqale bagxeka ozakwabo ngobuvila nokuthi bathi basebenze kanzima kunozakwabo – okuwubufakazi obucacile bokuba osomathuba kwi-EFF. Okuyinto okumele sibhekane nayo ngokushesha.
“Labo abafuna ukuba kuhlu lwabazomela iqembu kwi-EFF, iningi labo belimele iqembu kumawadi, abanqobanga amawadi abo, kodwa bathi basebenze kanzima. Ngakho akekho umuntu ozoba semandleni ngendlela enqamulelayo. Sifuna ukuthumela isexwayiso esiqinile kuwo wonke amalunga e-EFF acabanga ukuthi bangasabisa inhlangano, ukuthi iminyango ivuliwe ukuze bashiye. Ngoba i-EFF ayisilona ikhaya losomathuba,” kuxwayisa u-Malema.
Uqhube wathi kwi-EFF akekho umuntu ozoba yiMeya ngenkani, wathi i-EFF basayakha kanti bafuna ukufundisa amalunga abo indlela yokuziphatha kanye nothando lwenhlangano, hhayi uthando lwezikhundla.
“Bonke labo abebefuna ukuba sohlwini lwabamela iqembu yize noma behlulwe komasipala babo futhi bathi basebenze kanzima baphinde basabise ngokuphazamisa inhlangano, sizothatha izinyathelo zokuqondisa izigwegwe kubona. Noma ngabe ubani osabisa ngokuphazamisa amahhovisi e-EFF, osabisa ngokuvimbela amalunga e-EFF ekutheni afungiswe komasipala, abantu abaletha usiko lwe-ANC lokulwela izikhundla kwi-EFF,” kuqhuba uMalema.